Tena nisongadina tokoa ity olom-panjakana ganeana teo amin’ny andraikitra nosahaniny, ary nitazona izany toerana izany nandritra ny folo taona (1997-2007). Nahazo ny Loka Nobel mikasika ny Fandriampahalemana izy ihany koa ny tenany tany Oslo. Nilaza mihitsy i Antonio Guterres fa tena « hery nitarika ho any amin’ny tsara sy ny mendrika » hatrany izy ary tafiditra eo amin’ny Tantaran’izao tontolo izao i Kofi Annan. Nanome voninahitra azy avokoa ireo oloben’izao tontolo izao tamin’izao fahalasanany izao. Tsiahivina fa efa namita iraka teto Madagasikara ity sekretera jeneralin`ny Firenena Mikambana teo aloha ity tamin`ny taona 2006.